Usapho - Wikipedia
Usapho liqela labantu abaye bathi, kwiimeko ezininzi, bahlale kunye. Babelana ngemali nangokutya kwabo kwaye bamelwe kukukhathalelana. Amalungu alo asenokuzalana ngokwegazi (njengomntu nomnakwabo okanye nodade wabo) okanye ngokubotshelelwa kwabo ngokomthetho, umzekelo ngokwasemtshatweni. Kumasiko amaninzi, amalungu osapho anefani
abazali ababini nomntwana; Umfanekiso oqingqiweyo wosapho (eUnited Nations, eGeneva).
Usapho lubizwa ngokuba sisiseko sentlalo. Ubomi bosapho bungeemfihlelo zosapho kwaye ukuzalana kwamalungu alo kusondelelene kakhulu kunobomi bukawonke wonke. Kodwa ke kumazwe amaninzi kukho imithetho yako. Umzekelo, kukho imiqathango yokutshata apha kusapho kwaye kuyatshatyalaliswa ukwabelana ngesondo kwamalungu azalanayo, eingakumbi ebantwaneni.
1 Iintlobo zosapho
3 Amanye amaphepha anxulumene neli
Zintathu iintlobo zeentsapho, nazi, : usapho lwe-nuclear , usapho lwabazali abangenabalingani kunye nosapho ngokuzalana.
Usapho lwe-nuclear lunabazali kunye nabantwana usenokuba mnye nangaphezulu bonke behlala ndawonye.
Usapho olumzali mnye lolo athi emnye nje abe enomntwana omnye okanye abantwana ababini nangaphezulu.
Usapho ngokuphangaleleyo okanye iintsapho ngomnanyeneyo luthetha utata, umama, intombi, oonyana, umakhulu notat'omkhulu, umalume, u-anti, umzala, abatshana. Kumazwe amaninzi aquka iTshayina, iPakistan kunye ne-India, Lonke usapho ngokwanda kwalo luhlala ndawonye.
Zombini ezi ntsapho "olwabazali bobabini" nolo"lunomzali omnye" babizwa ngokuba ziintsapho "ezikufutshane".
Iintsapho zefoster ziintsapho apho umntwana akhuliswa khona ngabantu abangamzaliyo.
Ezinye iintsapho zisondelelene ngokuzalana. Olu luhlu lulandelayo lunika imizekelo yokuzalana ngokwesiNgesi.
izilwanyana zomnombo omnye ngokuzalana
Akukho qondo 99%
umceph'ucandiwe wamawele Akukho qondo
abazalwa kunye ngabazali abanye
I-Parent-offspring iqondo lokuqala
I-Offspring/progeny Iqondo lokuqalafirst-degree
I-Half-sibling Iqondo lesibini 25% (2−2)
I-3/4 siblings or sibling-cousin iqondo lesibini 37.5% (2−2+2⋅2−4)
Umhakhulu/uta'omkhulu iqondo lesibini 25% (2−2)
Abatshana Iqondo lesithathu
U-Anti/umalume iqondo lesithathu
i-Half-aunt, half-uncle Iqondo lesithathu
I-Half-niece/half-nephew Iqondo lesithathu
umama kamhakhulu Iqondo lesithathu
umzala omkhulu Iqondo lesine 12.5% (2⋅2−4)
i-Double first couisin Iqondo lesine 25% (2−3+2−3)
I-Half-first cousin Iqondo lesine 6.25% (2−4)
i-First cousin once removed Iqondo lesihlanu
I-Second cousin Iqondo lesithandathu
3.125% 3.13% (2−6+2−6)
I-Double second cousin Iqondo lesithandathu
I-Triple second cousin iqondo lesithandathu
i-Quadruple second cousin Iqondo lesithandathu
Umzala wesithathu Iqondo esixhenxe
I-Divorce uqhawulo mtshato
↑ By replacement in the definition of the notion of "generation" by meiosis".
↑ "Kin Selection".
Last edited on 2 Eyo Msintsi 2020, at 10:17
Eli khasi lagqityelwa ukulungiswa kwi-2 Eyo Msintsi 2020, kwi-10:17